Amasayithi e-Icelandic Online Casino - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Iyalayisha ... Imithetho yokugembula online e-Iceland iyakwenqabela umsebenzi wabasebenza emkhakheni wezokugembula. Ukugembula akuvunyelwe ezweni, kokubili kumakhasino asemhlabeni nakwi-Intanethi. Ukungafani nakho kuyizinhlangano eziqhutshwa yi-University of Iceland Lottery. Indaba yokwenza lolu hlobo lokugembula lube semthethweni icubungulwe kaningi nguHulumeni. Kodwa-ke, akukho zinguquko ezinhle ezilindelekile kubadlali kuze kube manje. Yize kufanele kwaziwe ukuthi ukufinyelela kumasayithi endawo ukugembula ku-inthanethi kuzosiza ukuqeda ngokushesha nangempumelelo ezinkingeni zezezimali zezwe. Okwamanje, abadlali nokubheja online kubathandi bezemidlalo e-Iceland bathola izikhala futhi basebenzise izinsizakalo zezinkampani zangaphandle.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 zase-Icelandic ku-Casino Sites
Kusukela ngoJanuwari we-2017 Gambling yamanje ayikho emthethweni e-Iceland, ngaphandle kwamalotho neminye imisebenzi yokugembula eqalwe yizinhlangano ezingenzi nzuzo. Umzimba okuwukuphela kwawo ogunyaziwe wokuphatha umsebenzi wokugembula yi-University of Iceland Lottery. Le nhlangano inemishini eminingi yama-slot, eyabhaliswa ngokusemthethweni ngo-1994, eduze kwamabha neziteshi zamafutha.
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-Iceland
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-Iceland, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi ekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali abavela e-Iceland.
Ngokwesifundo sakamuva se-KeyToCasino, umdlalo osekhasino eku-inthanethi awutholakali kubantu abangaphezu kwama-50% kuyo yonke imithetho yabantu beplanethi yamazwe abo. Kuvele ukuthi ukutholakala kokugembula kwi-Intanethi kuyehluka kakhulu kuye ngezwe. Ngenkathi kwamanye amazwe kuvinjelwe zonke izinhlobo zamakhasino aku-inthanethi kokunye ukwenqatshelwa kusebenza kuphela embonini yokugembula yendawo futhi akusebenzi ezinkampanini zakwamanye amazwe.
Ucwaningo lwenziwe ngokuqoqa nokutadisha imithetho yamakhasino asuselwa emhlabeni kanye naku-inthanethi emazweni angama-225 emhlabeni jikelele nokufundwa kwemithombo yolwazi ngezilimi ezahlukahlukene ezingama-46. Imithombo yakhethwa ukwethenjwa, njengezindawo zama-ejensi ohulumeni basekhaya kanye nabezindaba abacashunwa kakhulu esifundeni. Ngakho-ke, ucwaningo luhlanganise amazwe angama-95%, kanye nama-98% wabantu.
Mayelana namakhasino asemhlabeni ucwaningo luye lwembula ukuthi bavinjelwe noma bavinjelwe emazweni angama-74, kanti ezindaweni zokugembula zikahulumeni eziyi-151 zisemthethweni ngokuphelele. Kepha ngamakhasino aku-inthanethi isimo sihlukile:
Ukugembula ku-inthanethi kuvinjelwe emazweni we-39.
I-32 ithi ivinjelwe umsebenzi wezinkampani zomasipala zendawo yamakhasino ase-intanethi, kodwa ukukhishwa kwamakhasino kwezinye iziphathimandla akuzona.
Amazwe angama-61 avumela ukugembula kwi-Intanethi, kepha engxenyeni yawo umthethonqubo usebenza kuphela ezinkampanini zasendaweni. Njengasesigabeni esingenhla, umthetho walawa mazwe awulawuli amalayisense kwezinye iziphathimandla.
I-93 ithi ayivimbeli, kodwa ayikho i-casino e-inthanethi elayisensi.
Ngokuvamile, imingcele yokugembula inthanethi ngesilinganiso esisodwa noma enye ikhona kumazwe we-132, okuyi-akhawunti ye-56% yabaningi bomhlaba.
Ngakho-ke kulindelwe abantu abajwayelekile, abathathe isinqumo sokuzama inhlanhla kuwebhu? Abadlali emazweni angama-25 kufanele baqaphele ngokweqile futhi bazi ukuthi benzani, ngoba babhekene nesikweletu sobugebengu sokudlala online. Emazweni ayi-15, kungakhipha isijeziso sokuphatha, futhi izakhamizi zamazwe angama-92 zingadlala ngokukhululeka - kubo akuyona ingozi.
Qhubeka nokuphishekela abahlaziyi bezocwaningo bafunde izivumelwano zokuhlinzekwa kwezinsizakalo i-655 online casino yezindawo ezikhona zabahlali ezingavunyelwe ukuhlinzeka ngezinsizakalo. Amazwe aseTroika ahola ukuvinjelwa komdlalo wezakhamizi zawo ami kanje: I-United States (72% ivimbela amakhasino aku-inthanethi), iFrance (70%), i-Israel (54%). Amazwe amathathu aphezulu anephesenti eliphansi kakhulu lemikhawulo afinyelela e-Iceland (7%), eNew Zealand nase-Australia.
Ukuqonda, siyini isimo seziphathimandla ngokugembula okuqondene nezwe okuqondene nezwe futhi amakhasino amaningi aku-inthanethi anqatshelwe ukudlala izakhamizi zalelizwe, isifundo senze isilinganiso samazwe nezindawo ezingama-225 ngesisekelo sokulinganisela kokutholakala kokugembula ( Amaphuzu Okutholakala Ukugembula). Isibalo esiphezulu esikalini salokhu kuhlolwa kungu-1,000 500 lapho ama-500 ahlanganiswe nephesenti lakho konke okutholakala kubahlali bamakhasino aku-inthanethi ezwe kanti amanye ama-XNUMX ayizici zokulawulwa kombuso kwamakhasino asemhlabeni naku-inthanethi. Okokugcina kufaka izici ezifana nesidlali sobugebengu / sokuphatha esitholakalayo ekugembuleni oku-inthanethi nokudluliswa kwemali phakathi kwekhasino nomdlali.
Phezulu kwababekleliswe yiChile, i-Andorra neVenezuela, abathole amaphuzu angama-960. Ngaphansi kwesilinganiso kuhlaliswe iFrance (amaphuzu angama-412), i-Iran (407) ne-US (311). I-Russia ithole amaphuzu angama-686, ibeka i-173 ohlwini lwamazwe angama-225.
0.1 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 zase-Icelandic ku-Casino Sites
2.1 Ukugembula e-Iceland
2.2 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-Iceland
amakhodi webhonasi ye-7 yekhasino akukho idiphozi